Wese Munhu Ari Kubhururuka kuenda kuUnited States Anoda Kuwana Nyowani Negative COVID-19 Muedzo mukati memaawa makumi maviri nemana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Wese Munhu Ari Kubhururuka kuenda kuUnited States Anoda Kuwana Nyowani Negative COVID-19 Muedzo mukati memaawa makumi maviri nemana
Hurumende Nhau • Health News • nhau • USA Kuputsa Nhau
Mutungamiri weUS, Biden nhasi vazivisa mumusangano wenyika weTV wakatepfenyurwa nevatori venhau kuti munhu wese anofamba kuenda kuUnited States anofanirwa kupa bvunzo dzeCOVID-19 mukati memaawa makumi maviri nemana kubva.
Izvi zvinoshanda kune vashanyi, vafambi vebhizinesi, vamiriri, uye vagari vemuUS, uye vagari vemuUS.
Uyu murairo mutsva unoshanda kune chero munhu, kunyangwe kune vatakuri vakabaiwa zvizere.
Iyo mask mandate pandege ichadikanwa zvakare.
Iyi ishanduko huru kune vafambi vezororo.
The World Tourism Network yakarumbidza Hurumende yeAmerica nedanho iri asi iri kuti US haisi kuenda kure.
Iyo Hawaii-yakavakirwa World Tourism Network (WTN) iri kudaidzira kuti iongororwe nekukurumidza PCR bvunzo dzendege dzepasirese dzinopihwa kunhandare dzendege dzisati dzakwira ndege yepasirese. Muedzo wakadaro unogona kupihwa uye mhedzisiro inogona kugamuchirwa mukati memaminitsi gumi nemashanu. Izvi zvatove mureza muIsraeri.
World Tourism Network iri kufona kuti inoda yechipiri COVID-19 bvunzo mukati memazuva maviri mushure mekusvika. Pfungwa yechipiri ingave yekukurudzira furuwenza kupfurwa kana kufamba kukaitika munguva yefuruu neUS Izvi zvingadzivirira kuvhiringika mumhedzisiro yebvunzo.
Vasina kubaiwa vatakurwi vanofanirwa kugariswa kusvika mhedzisiro yebvunzo yechipiri yapinda, maererano nechikumbiro cheWTN.
Mutungamiriri wenyika akaombera Hurumende yeSouth Africa nekusimuka nekubatsira pasi rose mukuburitsa chirevo chakakodzera nguva nezverudzi rutsva rweOmicron. Mutungamiri weAmerica akabuda pachena kuti South Africa inofanirwa kuombererwa, kwete kunyorerwa mazita.